မမေ့နိုင်သောအစားအစာများ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > မမေ့နိုင်သောအစားအစာများ
ခရီးသွားသူများစွာသည်များသောအားဖြင့်ကျော်ကြားသောအထင်ကရနေရာများကိုသူတို့၏ခရီးစဉ်၏အဓိကအဖြစ်မှတ်မိကြသည်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်၊ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်လုပ်တယ်၊ သူတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးများကသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြောပြသည်။ ငါ့သားကမတူဘူး သူ့အဘို့, ခရီးစဉ်၏မြင့်အချက်များအစားအစာများဖြစ်ကြသည်။ သူသည်ညစာတိုင်းကိုအတိအကျဖော်ပြနိုင်သည်။ သူကကောင်းတဲ့အစားအစာတိုင်းကိုတကယ်နှစ်သက်တယ်။
သင်၏အမှတ်ရစရာအစားအစာအချို့ကိုသင်မှတ်မိကောင်းမှတ်ထားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်နူးညံ့။ အရည်ရွှမ်းသည့်ကင်သို့မဟုတ်အသစ်ဖမ်းမိသောငါးတစ်ကောင်အကြောင်းသင်စဉ်းစားမိသည်။ ၎င်းသည်အရှေ့ဖျားဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးထူးခြားဆန်းပြားသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီးနိုင်ငံခြားအရသာနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ အရိုးရှင်းဆုံးအနေဖြင့်သင်၏အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးအစားအစာမှာစကော့တလန်အရက်ဆိုင်၌သင်တစ်ချိန်ကစားခဲ့သောအိမ်လုပ်ဟင်းချိုနှင့်ပေါင်မုန့်ဖြစ်သည်။
Können Sie sich erinnern, wie Sie sich nach diesem wunderbaren Essen gefühlt haben - das Gefühl, satt, zufrieden und dankbar zu sein? Halten Sie diesen Gedanken fest, während Sie den folgenden Vers aus den Psalmen lesen: «Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang, im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl, mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt grosser Jubel» (Psalm 63,5 NGÜ)။
သူရေးခဲ့သည့်အချိန်တွင်ဒါဝိဒ်သည်သဲကန္တာရတွင်ရှိနေပြီးသူသည်စစ်မှန်သောအစားအစာပွဲတော်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်သူသည်အစားအစာကိုမဟုတ်ဘဲအခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သောဘုရားသခင်အကြောင်းစဉ်းစားနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူ့အတွက်ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းသည်ခမ်းနားထည်ဝါစွာစားသောက်ပွဲကြီးကဲ့သို့ပြည့်စုံခဲ့သည်။
Charles Spurgeon က“ David's Treasury” တွင်ရေးသားခဲ့သည်မှာ“ ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကိုယ်ခန္ဓာကိုအာဟာရဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်အချမ်းသာဆုံးအာဟာရနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၊
ဘုရားသခင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်အဘယ်သို့တူနိုင်မည်ကိုစဉ်းစားရန်ဒီမုန့်ညက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုဒါဝိဒ်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်သောအခါမြေကြီးပေါ်ရှိလူတိုင်းလိုအပ်သည်၊ မင်းအဝတ်တွေရှိပေမယ့်ဗိုက်ဆာနေရင်မင်းမကျေနပ်ဘူး။ သင့်တွင်အိမ်၊ ကား၊ ငွေ၊ သူငယ်ချင်း - သင်လိုချင်သမျှ - သို့သော်သင်ဆာလောင်နေလျှင်၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ အစာမရှိသောသူများ မှလွဲ၍ လူအများစုသည်ကောင်းသောအစာစားခြင်း၏ကျေနပ်မှုကိုသိကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အကောင်းဆုံးသောအစာ” ရှိသည့်အချိန်တွင်ဘုရားသခင်ကသူ့အားစဉ်းစားစေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစာအိမ်သည်အချိန်တိုအတွင်းပြည့်နေပြီးနောက်တဖန်ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ကိုယ်တော်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြည့်နေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ထာဝရကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်။ သူ၏နှုတ်မြွက်စကားတော်၌ပျော်မွေ့ပါ၊ သူ၏စားပွဲ၌စားသောက်ခြင်း၊ သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ကရုဏာကြွယ်ဝခြင်း၌ပျော်မွေ့ပါ။
သင်၏နှုတ်ခမ်းများသီ ဆို၍ သင်၏နှုတ်သည်သင့်ကိုအာသာပြေစေ။ အပေါများဆုံးအစားအစာနှင့်အလားသင့်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါစေ။